जहाज दुर्घटना : ९० प्रतिशत प्राविधिक तर पाइलटको मृत्यु भए ९५ प्रतिशत मानवीय त्रुटी « Imagekhabar – Online News Portal of Nepal
जहाज दुर्घटना : ९० प्रतिशत प्राविधिक तर पाइलटको मृत्यु भए ९५ प्रतिशत मानवीय त्रुटी
१६ जेष्ठ २०७९, सोमबार १८:३८
काठमाडौं । नेपाली आकाशको पारंगत पंक्षीजस्तै थिए प्रभाकर घिमिरे । अढाई दशक आकाशे यात्रामा विताएका प्रभाकर अरु बेला यस्ता दुर्घटना हुँदा विज्ञका रुपमा छानविन समितिको सदस्य भएर काम गर्थे । धेरैजसो छानविन समितिको निष्कर्ष हुन्थ्यो– ९५ प्रतिशत दुर्घटना मानवीय त्रुटिले हुने गर्छ । थाहा छैन-अक्करे भीरमा बज्रिएको विमान दुर्घटनाको कारण के थियो ?
कुनैबेला प्रभाकर संकटा फुटबल टीमका खेलाडी थिए । खेलाडीको परिचयले भोक मरेन, त्यसैले चरी झैं उड्ने पाइलटको जागिरतर्फ लागे । थुप्रै पटक क्याप्टेन प्रभाकरको यात्रु भएर नेपालका दुर्गम र पहाडी भेगमा उडान गरे । आकासमा आपत पर्दा आफ्ना प्रशिक्षित पाइटहरुलाई तत्काल लिनुपर्ने निर्णयको सूत्र बाँडे । उनकै कमाण्डमा रहेको विमान खै के चुकले पहाडमा ठोक्किएर २२ जनाको इहलीला सकियो । प्रतिवेदन त आउला तर सधैं संकटाको दर्शन गरेर घरबाट उडानमा निस्कने प्रभाकर फर्किने छैनन । उनका दाजुभाइ र साथीसंगीसंग उनको स्मरण मात्र बाँकी छ ।
यो विमान दुर्घटना वियोगान्तको अर्को दुःखद् पाटो भनेको अधिकांश एकै परिवार सदस्य पर्नु हो । गोर्खाका गणेशनारायण श्रेष्ठ, पत्नी रश्मी दुई हप्ताअघिअमेरिकाबाट आएका दुई छोरी रोजिना र रविनालाई लिएर मुक्तिनाथ दर्शनमा गएका थिए ।
त्यस्तै भारतको महाराष्ट्रबाट पत्नी वैभवी, छोरा धनुष, छोरी, ऋतिक लिएर आएका अशोक त्रिपाठी सपरिवार दुर्घटनासंगै बिलाएका छन् । दुई सन्तान र पत्नीलाई मुस्ताङ यात्रा गराउने उनको सपना भीरमै पूर्णविराम लाग्यो ।
धनुषाका राजनकुमार गोलेका त सातजना एकै परिवारका सदस्यले घटनामा ज्यान गुमाए । राजनका बुबा इन्द्र, आमा राममाया, काका पुरुषोत्तम, काकी तुलसीदेवी, मामा मकर र माइजु सुकुमाया तामाङको मुक्तिनाथ दर्शन गर्ने इच्छा अब कहिल्यै पूरा हुने छैन । बसन्त लामा त्यही विमान उडाउने क्याप्टेन थिए । छुट्टी मनाउन मुस्ताङ जाँदै गरेका बसन्तका लागि त्यही विमान काल ठहरियो ।
परिचारिका किस्मी थापा अत्यन्त मिजासिली थिइन । स्याङजाको वालिङ जन्मिएकी उनी साथीभाइकी प्रिय थिइन । एकल आमाले हुर्काएकी किस्मीले आफ्नो पेशागत सफलतासँगै परिवारको सम्पूर्ण दायित्व आफूले लिएकी थिइन् । उनको अन्त्यसँगै परिवारको दीयो निभेको छ । सामाजिक सञ्जालमा पनि उनी उत्तिक्कै सक्रिय थिइन ।
२५ वर्षे पाइलट उत्सव पोखरेल रुकुममा जन्मिएका हुन् । फिलिपिन्सबाट पाइलट कोर्स गरेका पोखरेल दुई वर्षअघि तारा एयरमा प्रवेश गरेका थिए । दुई जर्मन नागरिकको पनि यही उडानमा दुःखद् अन्त्य भएको छ ।
जहाजको प्राविधिक अवस्था चुस्त राख्न जहाज कम्पनीलाई खर्चको ठुलै भार पर्छ । पहाडी र हिमाली भेगमा उडान भर्दा मुनाफाका लागि बढी वजन, प्रतिकूल मौसममा पनि दबाबमा परेर उडान गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठने गरेका छन् । ठुलो दुर्घटनाको मुखमा पुगेर जहाजमा क्षति भएको तर पाइलट जोगिएका घटनाका संबन्धमा भएका छानबिनमा ९० प्रतिशतमा जहाजको प्राविधिक कमजोरी देखिएको छ । तर दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु हुनासाथ ९५ प्रतिशत मानवीय त्रुटी कसरी हुन्छ ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर यो प्रकरणमा नआउने निश्चित छ ।
धान दिवसको अवसरमा कर्णाली प्रदेशले दियो सार्वजनिक बिदा